WARBIXIN: Maxaa burburiyey riyadii kubadda cagta ee Yaya Toure? – Gool FM
WARBIXIN: Maxaa burburiyey riyadii kubadda cagta ee Yaya Toure?
Haaruun July 8, 2019
(Yurub) 08 Luulyo 2019. Toure waa mid ka mid ah halyeeyada ay tirsato qaaradda Afrika waliba ugu magaca sarreeya waxa uuna xiddiga reer Ivory Coast uu kubadda cagta yaraantiisii ku soo baxay laacib sare oo aan innaba caadi ahayn in kastoo riyadiisii uu hareer maray haatan.
Waxa aynu warbixintaan ku eegi doonaa Taariikh kooban iyo isbedellada uu soo maray Yaya Toure, kana yeelay in uu ka niyad jabo kubadda cagta, qaabkii uu kaga soo tagay Barcelona, sidii uu u qabsaday horyaalka Premier League, noqoshadiisii markii dambe halyeey Man City ah iyo xogo kale oo muhiim ah.
Haddaba si aad wax badan uga ogaato xogahaasi muhiimka ah, muqaalka hoose ka daawo, waxaana Warbixintaan inoo diyaariyaya idiina soo jeedinaya Wariyeheenna Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho.
Ander Herrera oo ka hadlay imaatinkiisa PSG iyo sababta uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Man United
RASMI: Kooxda Barcelona oo soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay martida tahay xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO